Fifanosehana teny Mahamasina: olona iray maty, 37 naratra mafy | NewsMada
Fifanosehana teny Mahamasina: olona iray maty, 37 naratra mafy
Korontana tampoka noho ny fifanosehana nitranga teny amin’ny kianjan’i Mahamasina , omaly, nandritra ny lalao nihaonan’ny Barea sy ny Liona avy any Senegaly. Nahafatesana olona iray izany, ary 37 hafa naratra, araka ny isa teny amin’ny HJRA.
Nitrangana fifanosehana ny fidirana tao amin’ny kianjaben’i Mahamasina, omaly, raha mbola tsy nanomboka akory ny lalao nihaonan’ny ekipa malagasy sy ny Senegaley. Vaky ny vavahady roa fidirana ao an-toerana nitrangan’ity loza ity. Nifanosika, nifanitsa-kitro, ara-bakiteny ireo olona marobe, samy niolomay niditra tao an-toerana. Tsy voafehin’ny mpandamina sy ny mpitandro filaminana intsony. Tabataba, hikiaka…
Olona iray, vokatr’izany, maty ary 37 hafa naratra , voatosika, voahitsaka. Voa mafy tamin’ny lohany, tapa-tanana sy tongotra ary voa tamin’ny lamosina avokoa ireo olona rehetra ireo. Niandahy niambavy ireto olona naratra ireto. Nifanaretsaka ny fiara an’ny Emmo/Reg sy ny ambulance nitondrana azy ireo teny amin’ny HJRA. Nampitomboina avy hatrany koa ny isan’ny mpitandro filaminana nanao ny fandaminana teny Mahamasina.
Tonga teny amin’ny HJRA ireo tompon’andraikitra avy amin’ny fitondrana ka anisan’izany ny filoham-pirenena mpisolo toerana sy ny minisitry ny filaminana anatiny, ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka. Nandray ny andraikiny izy ireo sy ny dokotera tao amin’ny sampana vonjy taitra tamin’ny famonjena sy ny fikarakarana ireo narary. Maro ihany koa ireo olona nanaraka ny havany teny an-toerana, sy ny hafa nijery sao misy olom-pantatra.
Maro ny nanome tsiny ny mpikarakara fa tsy nisy ny fahaiza-mandamina, nahatonga ity loza omaly teny Mahamasina ity. Toe-javatra efa miverimberina rehefa misy ny lanonana na lalao lehibe tahaka izao eny an-toerana. “Tsy novahana ny vavahady rehetra. Efa hita fa lava dia lava ny filaharana, mbola nosakanana. Nanampy trotraka ny fisian’ny fivarotana tapakila lafo tampoka”, hoy ny filazan’ny olona teny an-toerana.
Nisy koa anefa ny nanely tsaho fa nisy ny mpanakorontana teny an-toerana. Izany hoe heverin’ny sasany fa misy hatrany ny manararaotra manakorontana rehefa misy ny zavatra mahasarika olona maro.
Na izany na tsy izany, fakana lesona hatrany ny zava-mitranga. Tsy ampy ny mpitandro filaminana niasa, tsy toy ireny amin’ny matso sy ny raharaha politika ireny. Ny vahoaka madinika hatrany anefa no mizaka ny vokan’ny tsy fahaiza-manao, ny fanararaotana hanakorontana sns. Andrasana raha hisy ny fanadihadiana momba ity zava-nitranga ity.